Ekpere maka ụmụaka. ? Ọbara nke Kraịst na nke Mmụọ Nsọ
Ekpere Maka .mụaka. Ha bụ ihe kpatara nnukwu ọ joụ na iru uju onye ọ bụla nwere ike inwe. Nke a kpatara eji bulite a Ekpere maka umuaka Ọbara nke Kraist na Mụọ Nsọ bụ ihe a na-ahụkarị.
Site n’oge anyị mara na ha dị, obi anyị jupụtara n’arụ ọrụ na mmetụta ndị siri ike ịkọwa.
Uringtụkwasị nchegbu ndị a n’ekpere bụ ihe kacha mma anyị nwere ike ime dị ka ndị nne na nna mgbe anyị na-ewetara ụfọdụ obi mgbawa ma ọ bụ oke ụjọ.
Ka ọ dị ugbu a, mgbe nsogbu ndị ahụ yiri ka ọ bụ usoro nke oge ebe ụmụaka, ọkachasị n'oge ntorobịa, adịghị yie ka ha ga-achọpụta ihe ọjọọ niile na-emebi na gburugburu.
Nke a bụ ihe mere na, kama ị machibido ihe a ma ọ bụ nke ahụ, ihe ị ga - eme, ewezuga ezigbo agụmakwụkwọ, bụ iweghara ọnọdụ anyị n'akụkụ ekpere.
1 Ekpere maka Ismụaka Ekpere dị ike?
1.1 EKPERE Obara nke Kraist maka umuaka
1.2 Ekpere nke Mmuo Nso maka umuaka
1.3 Ekpere maka ụmụaka nnupụisi
1.4 Ekpere nye Ndi-mo-ozi nke umu
Ekpere maka Ismụaka Ekpere dị ike?
Ọtụtụ n’ime ndị na-agụ akwụkwọ anyị amaghị ma ekpere ahụ siri ike.
Ihe e ji mara ha dị ike, na-akpa ike nke ukwuu.
Ekpere anyị Ha bụ ndị mbụ.
Ha wepụrụ na Bible, saịtị ụka Katọlik na isi mmalite ntụkwasị obi.
Ha niile siri ike ma na-arụ ọrụ.
Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ekpere dị egwu maka ụmụaka, ị maralarịrị na ị nwere 3 dị n'okpuru. Jiri okwukwe siri ike kpee ekpere. Ikwere ike nile nke Chineke. N'ihi ya, ọ gaghị ada ada.
EKPERE Obara nke Kraist maka umuaka
Onyenwe anyị, Nna Pụrụ Ime Ihe Niile, anyị na-ekele gị maka inye anyị ụmụaka ndị a.
Ọ bụ ihe ọ joyụ nye anyị, na nchekasị, ụjọ na ike gwụrụ nke riri anyị ọnụ, anyị ji nwayọ nabata ha. Nyere anyị aka ka anyị jiri obi anyị niile hụ ha n'anya.
Site na ayi I mewo ka ndu di ndu; Site na mgbe ebighi-ebi niile ị maara ma hụ ha n’anya.
Nye anyị amamihe iji duzie ha inwe ndidi ka ha zụọ ha ka ha lezie anya ka ihe ha mee.
Na-ewulite ịhụnanya anyị iji mezie ha ma mee ka ọ dịkwuo mma.
O siri ike mgbe ụfọdụ ịghọta ha ka ha dịka ha chọrọ anyị, nyere ha aka ịme ụzọ ha.
Kụziere anyị ezigbo ezigbo Nna gị site na amara nke Jizọs nwa gị na Onye nwe anyị.
Did nwere mmasị n’ekpere nke ọbara nke Kraịst maka ụmụaka?
Ikwu na ofbara Kraist ka na-aga n’ihu n’elu obe bụ eziokwu nke ọtụtụ mmadụ na-enwe obi abụọ.
Agbanyeghị, ọbara a na-adịgide ọrụ ebube n'ụzọ dị ukwuu ma ọ bụghị O na adi nfacha njo anyi O nwekwara ike inyere anyị aka idozi ọnọdụ ọ bụla bilitere na karịa ma ọ bụrụ maka ụmụ anyị.
Jizọs, dị ka ezigbo nwa, maara ma ghọta ihe niile ụmụaka nwere ike gabiga, oge niile enwere ike ịnwa ha ịme ihe na-adịghị ha mma na nke amaghị, ma ọ bụ achọghị ịhụ.
Ọ bụ maka ihe a niile ịjụrụ ọbara maka arịrịọ ọ bụla pụrụ iche maka ụmụaka dị ike, na mgbakwunye na inye anyị udo dị mkpa iji chere ọrụ ebube ahụ, anyị nwere ike inwe obi ike na ọ ga-enyere anyị aka oge adịghị anya mgbe anyị ga-ahụ ihe anyị rịọrọ.
Ekpere nke Mmuo Nso maka umuaka
Onye-nwe, mee ka obi ụmụ anyị dị nkọ ka ha wee mara ụzọ ị chọrọ maka ha, ka ha wee nye gị otuto ma nweta nzọpụta.
Jiri ike gị jide ha, ka ha nwee ike gbaa gị ume na ndụ gị gbasara echiche nke Alaeze gị.
Mee ka anyi mata ndi nne na nna gi, nyere ha aka mata aka oru nke ndi Kraist ma mezuo ya na imesi ha ike.
Mgbe Jizọs rịgooro n’eluigwe ọ hapụrụ anyị na Mmụọ Nsọ ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ anyị ruo mgbe ebighi ebi ruo mgbe ọ laghachitere.
Ọ dịghị onye maara anyị karịa ya, ọbụnadị anyị onwe anyị.
Mgbe anyị na-echegbu onwe anyị, anyị kpughere onwe anyị, mgbe anyị bere akwa n'ihi nwa nwoke, mmụọ nsọ nọ ebe ahụ na-edebe anyị, ọ na-elekọtakwa nwa nwoke ahụ n'agbanyeghị ebe ọ nọ.
Ka anyị jiri okwukwe na ntụkwasị obi na-arịọ ya na ọ ga-enyere anyị aka ma mee ka ihe niile bụrụ ihe ọ kwesịrị ịnwe, ngwa ngwa karịa ka anyị tụrụ anya ya.
Ekpere maka ụmụaka nnupụisi
Chineke m, a na m enye gị ụmụ m; I nyere ha m, ha bụ nke gị ruo mgbe ebighị ebi; Agụrụ m ha maka gị ma arịọ gị ka ị debe ha maka ebube gị. Onye-nwe, nwere ike ịchọ ọdịmma onwe gị, oke-enweghị isi, ihe ọjọọ agaghị ahapụ gị n'ụzọ ọma.
Na ha nwere ikike ime ihe megide ihe ọjọ nakwa na ebumnuche nke omume ha niile bụ ihe ọma oge niile.
Idiọk odu ke ererimbot emi, Ọbọn̄!
Know maara ka anyị si bụrụ ndị na-adịghị ike na otu ihe ọjọọ si amasịkarị anyị; mana Gi nọnyeere m ma etinye m ụmụ m n'okpuru nchedo gị.
Nye ha ìhè, ike na ọ joyụ n’elu ụwa a, Onye-nwe, ka ha wee bie ndụ Gị n’elu ụwa a; na n ’n’eluigwe, anyị niile, anyị nwere ike ị na-enwe mmekọrịta n’otu ruo mgbe ebighi ebi.
Nnupụisi ahụ n’ime ụmụaka bụ ihe anyị nwere ike ịmalite ịchọpụta site na nwata ma ọ bụ n’oge ahụ ebe ị ga-ebido juo enyemaka site n’eluigwe.
Ọtụtụ oge anyị, dị ka ndị nne na nna chọrọ adreesị iji mara ihe anyị ga-eme na ihe anyị agaghị eme iji nyere nnupụisi nke ụmụ anyị aka adịghị njọ.
Dezie na a ekpere maka ụmụaka na-enupụ isi, site na mkpụrụ obi ka e nye anyị amamihe na ezi ndụmọdụ maka ụmụ anyị bụ ihe kachasị mma anyị nwere ike ime.
Ekpere nye Ndi-mo-ozi nke umu
Ezigbo Nna na Onyenwe anyị, jiri ịhụnanya gị gozie ekpere a infinito nke mere na mgbe ọ na-ahapụ egbugbere ọnụ m ike enweghị atụ nke obi m, ndị agha gị niile nke eluigwe na-aza oku m site n'inye ụmụ m ihe ọ bụla ha chọrọ maka mgbanwe na obi ụtọ ha.
Ekpuchie ekpere a jiri obi gi niile bia n’ajo gi ma ekwekwala ka ihe ojoo ma obu ihe ojoo m jupu ya. Onye isi ndi mmuo bu Michael a na m akpoku gi n’aha Onyenwe anyi ikuru umu m ma jiri mma agha ha chekwa ha njo.
Kewaa ha ọghọm na agbụ, hapụ ha ma nye ha okwukwe siri ike ka ha wee ghara isi n’ụzọ ọma pụta. Onye-isi-ozi nke Onye m hụrụ n’anya Onye-otu egwuregwu, a na akpọku m n’aha Onyenwe anyị ka ị jiri ìhè nke amamihe kee ụmụaka m.
Nyere ha aka ịzụlite ike na ikike ha nke ọma, wezuga ha na njehie, omume ọjọọ na amaghị ihe. Gbaa ha ume imuta ma merie n'okporo uzo ha mgbe nile ka ha wee mezuo oru ha ma nwe obi uto n’elu uwa.
Onye isi ndi mmuo nke amara m na - akpọku gị n’aha Onyenwe anyị iji mee ka ụmụ m jupụta n’ịhụnanya, gwọọ obi ha ma mee ka ha mata ezi ihunanya ma debe ya.
Nyere ha aka ibi ndụ n'ụzọ kwekọrọ n'ihe niile ụwa nyekwa ha ike imere ebere na ihunanya n’enweghi obi ojoo ma o bu ihe ojoo.
Ka Ìhè nke na-enwu n’ime mkpụrụ obi ha anaghị apụ apụ. Ka odi otua maka ngozi ezi na ulo anyi na otuto nke Chineke rue mgbe ebighi ebi.
A na-ekwu na mmadụ niile nọ n'ụwa nwere mmụọ ozi e kenyere, mana ekwughi otu ihe ahụ banyere ndị isi mmụọ ozi nakwa na ha so n'usoro ndị ọzọ nọ n'ọchịchị nke eluigwe.
Anyị nwere ike iji ha n'oge ọ bụla achọrọ.
Ndi dike, ndi agha na ndi enyi anyi, ndi isi okwu n ’enyere anyi aka mgbe nile ka anyi buso agha ndi ahu ike.
N'ihe banyere ụmụaka adịghị ihe dị mma karịa otu n'ime ha iji lụsoo mmeri n'akụkụ ọ bụla nwatakịrị chọrọ.
Ekpere maka tom to na thebara nke Kraist, nye M Holy Ns and na Onye Mkchang Onye Niile b servesr only nan to iji chebe ma kewapu umuaka na thezo ojoo.
N’ihi ya, egwu anaghị atụ gị ahịrịokwu niile dị n’isiokwu a.
Ihe dị mkpa bụ ikwere n'ike nke Chineke ma nwee okwukwe.
Kpee ekpere n’atụghị egwu, ị ga-agba ọsọ nke ọma.